Azonao lazaina ahy ve ny mahazo ny rohy mankany amin'ny tranokalako vaovao?
Alohan'ny hanehoana anao ny fomba hahazoana rindran-damina amin'ny tranokalanao vaovao dia andao hanomboka kely. Inona no tena sarobidy amin'ny backlink ho an'ny SEO? Midika izany fa raha mbola malaza amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Google ny tranonkala sy ny blaogy, ny lozam-pifamoivoizana ho an'ny SEO dia nanjary fitaovana lafo vidy. Saingy vao haingana, ny milina fikarohana lehibe manerantany dia nanery ny mpivarotra rehetra hifindra monina. Nahoana? Raha vao mividy rohy hanatsarana ny fikarohana ao amin'ny tranokalanao na blôgy ianao dia tsy ekena intsony fa mifanaraka amin'ny toro-làlana Main Webmasters amin'ny Google.
Amin'izany fomba izany, avelao aho hampiseho anao tarehimarika mangatsiaka izay azoko aorian'ny fanolorana bilaogy 250 sy tambajotra an-tserasera mifandraika amin'ny fananganana rohy mifandray. Noho izany, alohan'ny handinihana ny fomba hahazoana rindran-damina, dia soso-kevitra ny handinihana farafaharatsiny ireto manaraka ireto. Ireto misy lisitra fohy momba ny zavatra hitako:
Ny rindran-tsavily avo lenta miaraka amin'ny PageRank avo indrindra avy amin'ny tranokala PR1-2 sy bilaogy dia matetika amidy ho $ 30 hatramin'ny $ 120 isam-bolana. Raha manao izany ianao, dia mety hahazo rohy amin'ny sidebar sy ny footer ianao. Saingy ny zavatra dia ny fahatsapan'ny "backlinks" toy izao matetika amin'ny Google ho toy ny famolavolana tranonkala fifandraisana amin'ny rohy, noho izany dia indraindray mampihatra ny sazy avo lenta.
Ny indostria ara-barotra mahazatra indrindra sy ny fivarotana tsenan'ny fivarotana izay mivarotra rohy ny PBNs (tambajotra manokana) dia toy izao manaraka izao: Traveling, Fitness, Fashion, Finance, ary Marketing. Azonao atao angamba ny mividy rindran-damba ao amin'ny tranonkalan'ny safidy an-tsoratra ao amin'ny safidinao ao. Ary tsy misy tombanana sarobidy, toy ny vidim-panafody, dia miankina hatrany amin'ny tsenan'ny loharanon'ny rohy.
Toy izao no fomba niomanako hividianana rindran-kira ho an'ny tranokalako - jereo fotsiny ny totalim-piainana azoko avy amin'ireo bilaogy 250 sy ireo tambajotra an-tserasera rehetra nangatahana. Efa ho ny 50 tamin'izy ireo no nanaiky fa nanana kalitao ho an'ny fivarotana. 20 dia nanitrikitrika fa tsy manana rindrambaiko naloa izy ireo ary tsy nifampiraharaha tamin'ity karazana tolotra ity. Ary ny sisa tamin'izy ireo dia tsy nanana valiny tena izy.
Farany, efa ho ny antsasak'ireny tranonkala 50 sy bilaogy ireny no nanamafy fa nanana SEO ny fivarotana SEO ireo dia nanaiky ny hanao fifanarahana marina amiko.
Eny, araka ny hitanao - ny adihevitra momba ny fomba hahazoana rindran-damina dia tsy tafiditra amin'ilay fanontaniana. Midika izany fa tsy mora ny mividy rindrankajy ho an'ny tranokalanao vaovao, mazava ho azy fa manaiky ny mety ho tranga rehetra mety hitranga ianao amin'ny fametrahana sazy henjana ho anao. Noho izany, raha mbola te hilalao ianao, dia izao no fomba ahazoana rindran-damina amin'ny fomba azo antoka. Eritrereto ireto tetika manaraka ireto: 1)
Guest Blogging - Ny hafatra fandraisana an-tariby na lahatsoratra miaraka amin'ny mpitoraka bilaogy sasany dia angamba ny fomba azo antoka indrindra hividianana rohy ho an'ny tranokala vaovao na bilaogy.
Fanehoan-kevitra - toy ny bilaogy vahiny, mametraka fanehoan-kevitra manohana anao amin'ny tranonkalan'ny orinasam-pandraharahana na orinasa na ny tompon'ny bilaogy (admin) dia afaka manome anao lanjany tsara ho setrin'izany.
Product Reviews - fanazavana tena, satria ny fanamby tokana ho anao ihany no mamaritra ny loharanom-pahefana azo antoka ho an'ny lahasanao na ny adihevitra misy anao Source .